Medusa Rhizostoma - Beauty Eziyingozi
Medusa - a saziso umhlali amanzi olwandle. Phezu izigidi zeminyaka, lezi zidalwa ziye zashintsha kancane. Isenzakalo esidume kunazo zonke futhi iyingozi - Rhizostoma jellyfish, engatholwa emanzini oLwandle Olumnyama. Izinkulungwane izivakashi unyaka ngamunye zishiswa, ababone nalezi zilwane "cute".
Medusa Rhizostoma ibange inkathazo kunoma ubani lo onesibindi sokukhipha ukuyithinta. Lena enye yezinhlobo ezingu uwuhlobo eziyingozi kakhulu abamele. Kungaba ovelele kalula kusuka congeners ngumuntu eyindilinga "cap" ezinkulu, okuyinto 150 cm ububanzi, futhi ezinkulu zikhula - umsila okuthiwa. Medusa Rhizostoma, izithombe ongawabona ephepheni odla plankton ngokusebenzisa yesibili umlomo.
Kodwa-ke kunobufakazi amandla jellyfish niginge izinhlanzi ezincane, ezinamagobolondo, izimpethu, kanye nezinye izakhamuzi ukuzilwela olwandle. Lokhu kwenzeka uma ubuhle zasolwandle ekwazile uthwebule izinqubo inyamazane tapered. ngentambo esintinyelayo hit isisulu, le mishini yenze ke, bese nge indiza lamanzi okungena emlonyeni wakho. Ubuthi ungaphakathi yayifanekisela nomxhantela tapered kuthinta isisulu, okukhwantabalisayo ke.
Phezu izigidi zeminyaka, abanye izinhlanzi athuthukile a isazela evumela ukuthi ukuba untante eduze a jellyfish omkhulu, kanjalo ukuvikela komakhelwane ezilwaneni ezidla ezinye izilwane zasolwandle. Kodwa umsebenzi oyinhloko - ukuze sisinde abanjwe e nomsila "abavikela" yakhe.
Igama elithi "Rhizostoma" buyafaneleka. Iqiniso lokuthi leli akulona tentacles jellyfish. umlomo wayo yakha emphethweni obukhulu lapho ukunweba phansi bese eyama umsila. Eqinisweni - kuvulwa umlomo ngesimo amashubhu, kodwa umlomo yangempela ikhula njengoba isikhathi siqhubeka. izimbobo temlomo sangaphandle zifane izimpande obukhulu zalesi sihlahla, futhi ngalesosizathu yayiyingxenye khona igama ngokuqephuza.
Rhizostoma kuvamile oLwandle Olumnyama. Lokhu jellyfish kungatholakala kokubili ngesikhathi ukujula eduze nogu. Ngenxa yokuthi isondele kakhulu emabhishi nokungcebeleka burns yizingane ongaqaphile kanye nabantu abadala. Jellyfish ku Rhizostoma amanzi ibukeka exotic kakhulu. It ngokuphelele akufihli futhi akazami ukuba ukubaleka kancane ihamba. Kule ndaba, e eziningi kukhona isifiso ukubamba noma ukuyithinta. Lokhu ngobudedengu kuholela nemiphumela ngempela eziphathekayo - zesikhumba ukusha.
Jellyfish ushevu akuyona sibulala umzimba womuntu, kodwa ebangela ukusabela okukhulu nomzimba. Ngakho ubuhlungu iyakhula emanzini usawoti. Ubuhlungu cishe kuyafana for eshe kusukela sembabazane.
Phakathi nesivunguvungu, zonke jellyfish ukusuka ogwini ithwala phansi. Bathing ngemva usikhulule ukuhlangana lezi zilwanyana zasolwandle, nakuba hhayi isikhathi eside. Eqinisweni abathandwayo, ososayensi baye baqaphela, kanye nabadobi elula: Rhizostoma jellyfish ushabalala umbono amahora ambalwa ngaphambi kokuba isiphepho. Ukuzizwa kunyakaza olwandle, jellyfish saba phinda izambulela zabo iya ngezansi. Ndawonye nabo zinyamalale izinhlanzi ezincane kanye ezinamagobolondo, izimfanzi, okuyinto ukuntanta ngaphansi Dome yabo. Isayensi namanje akwaziwa ukuthi izidalwa abe presentiment isiphepho. Kodwa zinyamalala - uphawu olunembile yokuthi isiphepho lusondela. Ngakolunye uhlangothi, endaweni sezulu sithi iholidi elinokuthula serene, labantu "esivuthayo" ubuhle e emanzini angasogwini iye kokukhulumela phezulu. Sukani ehlangene nabo ngangokunokwenzeka uma ukubhukuda ngokuqapha.
Orchard - eziyigugu ifolishi kwezitshalo
Ubuhle Mangalisayo we zamakhorali zamakhorali, noma Kuyini coral